နိုင်ငံရေးပြဿနာလည်းဖြစ်လာတဲ့ Yasukuni နတ်ကွန်းမှာ ဘာတွေရှိနေလို့လဲ? - JAPO Japanese News
နိုင်ငံရေးပြဿနာလည်းဖြစ်လာတဲ့ Yasukuni နတ်ကွန်းမှာ ဘာတွေရှိနေလို့လဲ?
ဟူး 29 Sep 2021, 14:07 ညနေ
ဝန်ကြီးချုပ် Suga နောက်မှာဘယ်သူက လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်ပြီး၊ ဂျပန်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ဖြစ်လာမလဲ?
ဒီပြင်းထန်တဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲလက်တလောဖြစ်နေတဲ့ဂျပန်မှာ၊ နိုင်ငံခြားသားဆီကနေ ထူးဆန်းစွာနဲ့မေးလာတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။
“ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်၊ Yasukuni နတ်ကွန်းကိုသွားလည်ပတ်မှာလား?” တဲ့..
ဒါဟာဒီတစ်ခေါက် ဝန်ကြီးချုပ်ရွေးကောက်ပွဲမှမဟုတ်ဘဲ၊ အကြိမ်တိုင်းကြားနေရတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်မှာတော့ နတ်ကွန်းပေါင်း ၈ သောင်းခွဲခန့်ရှိပါတယ်။
ဒီအပြင်နတ်ကွန်းငယ်လေးတွေပါထည့်ပေါင်းရင် နတ်ကွန်းပေါင်း ၁ သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီအထဲကမှ ဟောဒီ Yasukuni နတ်ကွန်းတစ်ခုတည်းကသာလျှင် ဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ပြောင်းတဲ့အကြိမ်တိုင်း လူအများအာရုံစိုက်ခြင်းခံရပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဒီနတ်ကွန်းကသာလျှင် ထူးခြားနေသလဲဆိုတာ စာဖတ်သူတို့သိထားကြလား?
တိုကျို၊ Chiyoda ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ Yasukuni နတ်ကွန်း…..
၁၈၆၉ ခုနှစ်မှာဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး နွေဦးမှာအလွန်လှပတဲ့ဆာကူရာပန်းတို့ကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီခေတ်မှာသေဆုံးသွားတဲ့လူတွေ၊ တိုင်းပြည်အတွက်အသက်စွန့်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေကို ကိုးကွယ်ဖို့နတ်ကွန်လိုအပ်တယ်လို့အဆိုတင်သွင်းရာကနေ အဲ့ဒီအချိန်ရဲ့ ဧကရာဇ်ဘုရင်မင်းမြတ်ဖြစ်တဲ့ Meiji ဧကရာဇ်ဟာ ဟောဒီ Yasukuni နတ်ကွန်းကိုဆောက်လုပ်ဖို့ ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။
အပေါ်ကဓါတ်ပုံထဲက အဖြူရောင်ပိတ်စပေါ်မှာရေးဆွဲထားတဲ့ ဂန္ဓမာအမှတ်အသားဟာ ဧကရာဇ်အမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Yasukuni နတ်ကွန်းမှာတော့ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် အသေခံတိုက်ပွဲဝင်သွားသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတည်ထားကိုးကွယ်ထားပြီး၊
၎င်းဟာယခုအချိန်ထိဆိုရင်ဝိညာဉ်ပေါင်း ၂,၄၆၆,၀၀၀ ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ်ကဒီနေရာကို လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းဟာ ဘာကြောင့်ပြဿနာကြီးဖြစ်ရသလဲ?
အကြောင်းကတော့ ကိုးကွယ်ခံရသူတွေထဲမှာ စစ်ရာဇဝတ်သားတွေလည်းပါဝင်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာစစ်ပွဲကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့ တာဝန်ရှိအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ် လူ ၁၄ ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
ဥပမာ အဲ့ဒီအထဲကလူတစ်ယောက်က ဝန်ကြီးချုပ် Hideki Tojo ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့တွေလည်း အတူကိုးကွယ်နေတဲ့နတ်ကွန်းမှာ ဂျပန်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သူဝန်ကြီးချုပ်ဟာ နတ်ကွန်းသွားရောက်လည်ပတ်မယ်ဆိုတာက “ စစ်အာဏာရှင်စနစ်” သို့ဂျပန်ဟာ နောက်ကြောင်းပြန်ခေါက်သွားခဲ့ရင် အထူးသဖြင့် တရုတ်၊ကိုရီးယားဟာ အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ကြမှာပါ..။
ဒီ ၂ နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးကိုများစွာထိခိုက်စေတဲ့ပြဿနာဖြစ်တာကြောင့်၊ ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ Yasukuni နတ်ကွန်းသို့သွားရောက်ကိုးကွယ်ခြင်းဟာ သတင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
စစ်ပွဲအတွင်းကရာဇဝတ်သားနဲ့ သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ခြားနားချက်က အရမ်းရှုပ်ထွေးပါတယ်။
နိုင်သွားမယ်ဆို သူရဲကောင်းဖြစ်မယ်၊ ရှုံးသွားရင်စစ်ရာဇဝတ်သားဖြစ်မယ်။
နောက်ပြီး ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ စစ်ရာဇဝတ်သားကိုဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့တာကတော့၊ အရှေ့ဖျားအတွက်နိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံး (တိုကျိုခုံရုံးလို့လူအများသိကြ) ရဲ့ ဆုံးဖြတ်တဲ့ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
“ တရားခွင်လို့ခေါ်နိုင်တဲ့အရာတောင်မဟုတ်ခဲ့ဘူး” လို့ပြောကြပါတယ်။
ဂျပန်ကတိုက်ခိုက်လို့ ထိခိုက်ပျက်ဆီးသွားရတဲ့တိုင်းပြည်ဘက်ကနေပြောရရင် ရာဇဝတ်သားတွေလို့လာထောက်ပြတာကို နားလည်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့၊ မတိုက်ခိုက်ဘူးဆိုရင် ဂျပန်ဟာကိုလိုနီလက်အောက်ကိုကျရောက်သွားမှာပဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့၊
ဒီစစ်ပွဲရဲ့ရလဒ်ဖြစ်တဲ့ အနောက်နိုင်ငံအားဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရဲ့ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ခြင်းရပ်တန့်သွားတာကိုစဥ◌်းစားကြည့်ရင်၊ အရမ်းအဆိုးစားကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ ရိုးရိုးလေးတွေးမိပါတယ်။
လူသတ်တာရော တခြားနိုင်ငံကိုဒုက္ခသွားပေးတာကရော သေချာပေါက်မလုပ်သင့်တဲ့အရာပါ…
မုန်းချင်မုန်း စစ်ပွဲဆိုတဲ့အရာကိုပဲမုန်းတီးသင့်ပြီး၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
တစ်ဦးချင်းစီကဘယ်လောက်ပဲတော်နေပါစေ တစ်ယောက်တည်းနဲ့တော့ စစ်ပွဲကိုမဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။
စစ်ပွဲဖြစ်ပွားရတဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရင်းကိုမစဥ◌်းစားဘဲ၊ တစ်ယောက်ချင်းစီကြောင့်လို့အပြစ်ပုံချရင် အနာဂတ်ဖြစ်လာမယ့်စစ်ပွဲကိုလည်း တားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
Yasukuni နတ်ကွန်းသို့သွားရောက်ဝတ်ပြုခြင်ဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပြန်သွားခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ဂျပန်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို နှုတ်ဆက်ဂါရဝပြုခြင်းပဲလို့ ထင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်နှင့်၊ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်နိုင်ခွင့်ရှိတာကြောင့် အဲ့ဒီလိုတွေးသူတွေအပြစ်မဆိုချင်ပေမဲ့၊ ဒါကြောင့်လို့ပြောပြီး သူတစ်ပါးရဲ့ကိုးကွယ်မှုကိုတော့ မဝေဖန်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်နော်..
စကားမစပ် Yasukuni နတ်ကွန်းမှာ Yushukan လို့ခေါ်တဲ့ပြတိုက်ကို ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။
ဓါတ်ပုံထဲကအတိုင်း တကယ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လက်နက်တွေကိုပြဿထားပေမဲ့၊ ကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တာက အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူး။
“ မနက်ဖြန် တိုက်လေယာဉ်နဲ့ ရန်သူ့စစ်သင်္ဘောကိုအသေခံဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်တော့မယ်”
ဆိုပြီး လူငယ်တွေဟာမိဘတွေဆီပို့ခဲ့တဲ့ စာလေးတစ်စောင်သာဖြစ်ပါတယ်။
သားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းအစတွေကိုတောင် ပြန်မရတဲ့ မိဘရဲ့ဖြေမဆယ်နိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေပြည့်နက်နေတဲ့ ဟောဒီပြတိုက်ကို Yasukuni နတ်ကွန်းမှာပြသထားပါတယ်။
ကျွန်တော့အတွက်တော့ Yasukuni နတ်ကွန်းဟာ စစ်ဝါဒကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေဖို့မဟုတ်ဘဲ မျိုးချစ်စိတ်နဲ့စစ်ဆန့်ကျင်ရေးကို တိတ်တဆိတ်ထုတ်ဖော်ပြသနေသလိုခံစားရပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားတဲ့လူကတော့ တိုကျိုကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် Yasukuni နတ်ကွန်းကိုသွားရောက်လည်ပတ်ကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Kamikaze special attack
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ ထိုးခဲ့တဲ့တက်တူး
ပညာမရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့အင်္ဂါရပ်များနှင့် သူတို့နှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနည်း ?
2020 ခုနှစ်ကိုပုံဖော်တဲ့ Kanji စကားလုံး !!! Kiyomizu-dera ဘုရားကျောင်း ကြေငြာပြီ !!!
ဂိမ်းဆော့ပြီး တိုကျိုတက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းတက်ရအောင်လုပ်ကြမယ်!? အရေးကြီးတဲ့သော့ချက်နည်းဗျူဟာလမ်းညွှန်
Edo ခေတ်က တုပ်ကွေးရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနည်းလမ်းဟာ အောင်မြင်ခဲ့သလား?
Positive thinking ဖြင့် ပျော်ရွှင်မှုဆီသို့အရောက်သွားပါ !!!!